Tetika 5 hitahiry angona amin'ny findainao | Vaovao momba ny gadget
Villamandos | | General, Finday, WhatsApp
Ny iray amin'ireo olana lehibe ananan'ny olona isan'andro dia ny tsy mandany na mandany ny tahan'ny angon-drakitra nifanarahan'izy ireo. Ny "poloney" ny angon-drakitra alohan'ny faran'ny volana na ny volan'ny faktiora, dia midika hoe mandany fotoana nefa tsy afaka mivezivezy ary amin'ny fotoana maro nefa tsy afaka mifandray amin'ny namana na mpiara-miasa. Ny ankamaroan'ny orinasa finday, raha vao tratra ny fetran'ny tahiry, mampihena ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana izy ireo, izay amin'ny tranga maro dia tsy afaka manokatra pejy web na mandefa sary amin'ny alàlan'ny WhatsApp.
Mba tsy hahatratra ny fetran'ny tahan'ny angon-drakitra misy anay, ary tsy mila misotro zava-pisotro ratsy mandritra ny andro vitsivitsy ianao, anio dia hilaza aminao izahay Fetsy mahaliana 5 hitahirizana angona amin'ny findainao. Raha iray amin'ireo mandany haingana ny angon-drakitrao ianao, nefa tsy tsapanao akory, tsy isalasalana fa mahaliana anao izany, ka jereo tsara ary ambonin'izany rehetra izany mba hampihatra ny torohevitra rehetra izay homena anao faran'izay haingana.
Raha iray amin'ireo izay tsy mandany ny tahan'ny angon-drakitrao isam-bolana ianao, koa mitandrema satria tsy ampy ny mitandrina sy mianatra mitahiry data satria ho ela na ho haingana dia avelan'ny mpandraharaha hisafidy ny isan'ny gigabytes na megabytes izahay te hanakarama isam-bolana amin'ny taona ary raha toa ianao ka mitahiry vola na mihary amin'ny fampiasana angona dia mety ho mora vidy kokoa ny faktiora findainao.
1 Araho maso akaiky ny WhatsApp
2 Vonoy ny fampiasana angona amin'ny fampiharana sasany
3 Mametraha fampandrenesana mihinana be loatra
4 Sintomy ny sari-tany ampiasainao indrindra ao amin'ny Google Maps
5 Fero ny fanjifana ny browser-n'ny tranonkala
Araho maso akaiky ny WhatsApp
WhatsApp ampahany amin'ny fiainana andavanandron'ny ankamaroan'ny olona izy io ary iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny taham-bolantsika haingana be. Amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo dia tsy mandefa hafatra an-tsoratra fotsiny isika, fa mandefa sary, horonan-tsary na koa manao antso. Izany rehetra izany dia mandany ny angon-drakitra, data marobe, izay mahatonga ny tahanay hihena be ary amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hitehirizana ny angon-drakitra momba ny salan'isa dia ny famerana ny fampiasana an'ity fampiharana ity, ohatra, ny fisorohana ny sary na horonan-tsary tsy alaina ho azy raha tsy mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi.
Mba hanaovana izany dia mila manaraka ireo dingana fotsiny ianao, raha sendra manana fitaovana Android ianao;
Midira amin'ny fampiharana WhatsApp izay hanananao ao anaty vatasarihana fampiharana
Tsindrio ny kisary amin'ireo teboka telo izay ho hitanao eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery. Rehefa avy tsindrio ianao dia safidio ny safidy "Settings"
Mandehana any amin'ny "Chat Chat"
Izao dia tsy maintsy ampidirinao ny fizarana "Fampidinana automatique ny multimedia" ary, amin'ny safidy "Connected to mobile data", dia tsy maintsy asio marika ny "No file". Amin'izany dia tsy ho sintomina ho azy intsony ireo rakitra azonao amin'ny solo-saina
Raha sendra manana iPhone isika dia toy izao manaraka izao ny dingana manaraka;
Midira amin'ny fampiharana WhatsApp
Ankehitriny dia tsy maintsy miditra amin'ny menio "Settings" ianao izay hita eo amin'ny faritra ambany ankavanan'ny efijery lehibe
Tsindrio izao ny safidy "Fikirakirana chat" ary fidio ny fizarana "Fampidinana auto-multimédia"
Raha vantany vao eo ianao dia tokony handinika ny famelana ny safidy "WiFi" voamarina mba tsy hisintona ho azy ireo rakitra eo amin'ny fitaovanao rehefa mahazo azy ianao
Fomba iray hafa hialana amin'ny fandaniam-poana ny data dia ny fisafidianana ny fampiasana iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo eny an-tsena, na dia ny ankamaroan'izy ireo aza, raha tsy apetranao ny fetrany dia mandany angona be dia be.
Vonoy ny fampiasana angona amin'ny fampiharana sasany
Isika rehetra na saika isika rehetra dia manana andiana fampiharana izay tsy ampiasaintsika matetika, afa-tsy amin'ny filàna faran'izay mafy, rehefa tsy mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi isika. Na izany aza, imbetsaka isika no mampiasa azy ireo amin'ny tsy nahy, mandany matetika amin'ny ankamaroan'ny tranga data avy amin'ny salanisa.
Ohatra Spotify, Instagram na YouTube dia sasany amin'ireo rindranasa tsy ampiasainay rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra 3G na 4G izahay. Mba hisorohana ireo fifandraisana tsy mandeha amin'ny laoniny ireo, ny iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra dia ny fanalana ireo rindranasa ireo rehefa tsy mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi isika. Mba hanaovana izany dia mila manaraka fotsiny ireto dingana manaraka ireto amin'ny findainao na tablette ianao.
Raha sendra manana fitaovana miaraka amin'ny rafitra fiasa Android ianao;
Midira amin'ny menio Settings
Mandehana any amin'ny fizarana "Fitantanana fifamoivoizana data" (na "Fampiasana tambajotra")
Ankehitriny dia tsy maintsy mitady ny safidy ahafahanao manamboatra ny fifandraisana mandeha ho azy amin'ireo rindranasa amin'ny tamba-jotra. Matetika izy io dia "Fampiharana tambajotra", na dia hiankina betsaka amin'ny kinova Android ampiasainay aza izany. Miankina amin'ny lamina fanaingoan'ny mpanamboatra tsirairay ihany koa ity safidy ity mety tsy ho azon'ny fikorontananay
Ary farany, tsy maintsy hofoananay ny safidin'ny "angona finday" amin'ireo rindranasa izay tsy tiantsika ny hampifandray amin'ny alàlan'ny taham-baovao.
Raha sendra manana iPhone na iPad ianao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto;
Ankehitriny dia tsy maintsy ampidirinao ny fizarana "Data momba ny finday"
Ny fidinana eo amin'ny efijery dia tokony hitady ilay safidy "Mampiasà angona finday ho an'ny;" ary eo no ahafahantsika mamono ireo rindranasa izay tsy tianay handaniana ny angon-drakitra ny tahan'ny finday
Tsotra, marina? Satria ity hetsika ataon'ny mpampiasa vitsivitsy ity dia mahangona tahiry be dia be isam-bolana, ka aza mandany fotoana intsony ary manao azy dieny izao.
Mametraha fampandrenesana mihinana be loatra
Fomba iray hahafantarana hoe ohatrinona ny angona nampiasainay tamin'ny fotoana rehetra sy izay misy ho antsika apetraho ny fampandrenesana ny fanjifana. Ity safidy ity dia misy amin'ny fitaovana Android sy iOS, ka tsy manana fialan-tsiny ianao amin'izany.
Ilaina tokoa ity safidy ity satria, ohatra, mametraka fampandrenesana fanjifana isika rehefa mihinana 2 GB amin'ny taha-pahanantsika, miankina amin'ny andro amin'ny volana nahazoantsika ilay fampandrenesana, dia afaka mandray fepetra henjana bebe kokoa na kely kokoa hanaraha-maso ny angona fanjifana ny tahan'ny finday.
Raha hametraka fampandrenesana fanjifana amin'ny fitaovana Android dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao;
Tsindrio izao ny fizarana "Fampiasana data"
Raha mifanentana amin'ity asa ity ny fitaovantsika (ny ankamaroany amin'ny kinova Android izay tsy dia antitra loatra), dia ampiasainay izany ary haseho antsika ny graf izay ahafahantsika mametraka fetra amin'ny fanjifana angona isam-bolana
Raha tsy maharesy lahatra anao loatra na tsy misy amin'ny fitaovanao ity safidy ity dia azonao atao foana ny mampiasa ny lisitry ny antoko fahatelo toy ny My Data Manager izay mamela anao hametraka fanairana momba ny fanjifana data. Soa ihany na indrisy, raha manana iPhone na iPad ianao dia tsy maintsy mampiasa rindrambaiko hanao izany satria tsy misy azy io amin'ny iOS.
Sintomy ny sari-tany ampiasainao indrindra ao amin'ny Google Maps
Ny iray amin'ireo rindranasa mandany ny angona betsaka indrindra avy amin'ny fitaovantsika finday dia tsy misy isalasalana Google MapsMazava ho azy, ampiasaintsika foana ho toy ny GPS izany mba hanandramana hahatongavana any amin'ny toerana iray am-pahombiazana. Fomba iray hitahiry an'ity fanjifana data ity ny fisintomana ireo sarintany izay ilainay rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi isika.
Amin'izany dia hialantsika fa mifandray tsy tapaka izy io rehefa miditra amin'ny fiara mandany ny angon-drakitra ny tahan'ny finday isika.
Ny mpampiasa rehetra dia afaka misintona sarintany amin'ny Google Maps mba hidirana amin'izy ireo raha tsy misy fifandraisana amin'ny tamba-jotra, izay tena ilaina amin'ny tranga maro.
Fero ny fanjifana ny browser-n'ny tranonkala
Raha hikatona ireo andiana torohevitra ireo dia tsy afaka mijanona milaza izany aminao izahay ianao dia tokony hametra ny fanjifana angon-drakitra amin'ny tranokalanao, izay raha mampiasa Google Chrome ianao, dia zavatra tena tsotra ary ilaina ihany koa. Araka ny fantatsika rehetra, ity no tranokala natsangana natsangana tamin'ny Android, fa misy ihany koa amin'ny iOS, izay mazava ho azy fa afaka mamonjy amin'ny fampiasana ny data data finday.
Raha te hampiasa ity asan'ny Google Chrome ity dia mila manaraka ireto dingana manaraka fotsiny ianao;
Sokafy ny tranokala Google Chrome amin'ny findainao
Ankehitriny dia tsy maintsy idirantsika ny safidy "Fikirakira" (ho hitanao miafina ao ambanin'ny kisary amin'ireo teboka telo izay hitanao eo amin'ny ilany ankavanan'ny fampiharana)
Avy eo dia tsy maintsy tsindrio ny safidy "Save data". Raha ny momba ny iPhone na iPad dia tsy maintsy miditra amin'ny safidy "Bandwidth" aloha isika
Farany dia ampodinintsika ny safidy ary ho hitantsika fa misy sary naseho izay amin'ny alàlan'ny fandehan'ny andro dia ho hitantsika ireo megabytes nitahiry antsika
Raha mampiasa Google Chrome ho toy ny mpizaha anao ianao dia aza atsahatra ny fampandehanana an'io safidy io satria tsy hiteraka olana izany ary tsy ho hitanao na inona na inona mihitsy rehefa mijery ny tambajotram-pifandraisana ianao, na eo aza ny andro, dia ho hitanao ny tahiry ao amin'ny fanjifana ireo megas.
Vonona hitahiry angona momba ny tahan'ny findainao amin'ireto toro-hevitra tsotra nefa mahasoa nomenay anao ireto?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Tetika 5 hitahiry angona amin'ny findainao
Ity ny fampahalalana rehetra fantatsika momba ny Huawei P9